‘परिवर्तन तबमात्रै हुन्छ, जब साधारण मानिस सामेल भएर यसको माग गर्छन्’ - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘परिवर्तन तबमात्रै हुन्छ, जब साधारण मानिस सामेल भएर यसको माग गर्छन्’
ओबामाको विदाई भाषणका १० कुरा
विदाई मन्तव्यका क्रममा भावुक ओबामा
राष्ट्रपतिका रुपमा दुई कार्यकाल सम्पन्न गरेका बाराक ओबामाले मंगलबार राती शिकागोमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच विदाई मन्तव्य दिएका छन्। राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो अन्तिम मन्तव्यमा ओबामा गर्विलो तर भावुक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।
आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिहरुको विवरण सुनाउँदै ओबामाले आफू अझ पनि आशावादी रहेको बताए। उनले कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण, कर्मचारीगण, उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, पत्नी र छोरीहरुलाई समेत धन्यवाद दिए। उनको मन्तव्यका दश महत्वपूर्ण कुराहरु यसप्रकार छन्ः
१. ‘अब धन्यवाद भन्ने पालो मेरो हो।... तपाईंहरुले मलाई अझ राम्रो राष्ट्रपति बनाउनुभयो र तपाईंहरुले मलाई अझ राम्रो व्यक्ति बनाउनुभयो।’
२. ‘परिवर्तन तबमात्रै हुन्छ, जब साधारण मानिसले यसमा सामेल भएर परिवर्तनको माग गर्छन्।’
३. ‘ख्याल गर्नुहोस्, लोकतन्त्रतलाई एकरुपता आवश्यक छैन। हाम्रा सँस्थापकहरु आपसमा झगडा गरे र सम्झौता पनि गरे। हामीले पनि त्यसै गरौँ भन्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो। तर लोकतन्त्रमा ऐक्यबद्धताको आधारभूत भावना आवश्यक छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा थियो। अनेकौँ भिन्नताका बावजूद हामी सबै साथमै यहाँ छौँ। हाम्रो उन्नति र अवनति एकैसाथ हुन्छ।’
४. ‘म राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उत्तर–जातीय अमेरिकाको चर्चा चल्यो। त्यस्तो दृष्टिकोण राम्रो उद्देश्यले आएपनि यथार्थपरक कहिल्यै थिएन। हाम्रो समाजमा जात विभाजक शक्तिको रुपमा विद्यमान छ। तर गत १०, २० वा ३० वर्षपहिलेभन्दा अहिले जातीय सम्बन्ध राम्रो बनेको छ। ... तर हामी जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ। हामीले विभेदका विरुद्ध कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ। तर कानुन एक्लै पर्याप्त हुनेछैन। मन परिवर्तन हुनैपर्छ।’
५. ‘नयाँ थपिएका मानिसहरुका कारण अमेरिका कमजोर भएको होइन। उनीहरुले राष्ट्रले अपनाएको बाटो आत्मसात गरेका थिए र यो शक्ति हो।’
६. हाम्रो संविधान उल्लेखनीय र सुन्दर उपहार हो तर यो वास्तवमा एउटा कागजको खोस्टो मात्रै हो। आफैँमा यसको कुनै शक्ति छैन। हामी मानिसहरुले यसलाई शक्ति प्रदान गर्छौँ, सहभागिता र चुनावमार्फत। हामी स्वतन्त्रताका लागि उभिन्छौँ कि उभिदैँनौँ, हामी कानुनको शासनको सम्मान र पालना गर्छौँ कि गर्दैनौँ, ... अन्ततः लोकतन्त्रले यही कुरा माग गर्छ।’
ओबामाको भाषणका क्रममा प्रथम महिला मिसेल र छोरी मालिया
७. ‘मिसेल, विगत २५ वर्षका लागि तिमी मेरी पत्नी र मेरा बच्चाकी आमा मात्र होइन मेरो उत्तम मित्र पनि थियौँ। तिमीले आफूले नखोजेको भूमिका अपनायौ र त्यसलाई दया, धैर्य, आफ्नै शैली अनि राम्रो भावका साथ निभायौ। तिमीले ह्वाइटहाउसलाई सबैको आफ्नै घरजस्तो बनायौ र तिमी रोल मोडेल बन्यौ। तिमीले मलाई गौरवान्वित बनाएकी छौ, तिमीले देशलाई गौरवान्वित बनाएकी छौ।’
८. ‘मालिया र सासा, अनौठा परिस्थितिहरुमा पनि तिमीहरु दुईजना गजबका महिला बन्यौ। स्मार्ट, सुन्दर र मुख्यगरी दयालु, विचारशील र जोशले भरिपूर्ण। तिमीहरुले सजिलै वर्षौँसम्मको बोझलाई झेल्यौ। मैले जीवनमा गरेका सम्पूर्ण कामबाहेक म तिमीहरुको बाबु बनेकोमा बढी गर्व गर्छु।’
९. जो बाइडेन, स्क्रान्टनबाट आएको बेजोडको केटो, जो डेलवेयरको प्यारो छोरो बन्यो, उम्मेदवारको रुपमा मेरो पहिलो र सबैभन्दा उत्तम रोजाइ थियौ तिमी। तिमी महान उपराष्ट्रपति बनेकाले मात्रै होइन, यो क्रममा मैले एक भाइ प्राप्त गरेँ। हामीले एक परिवारको रुपमा तिमी र जिललाई माया गर्छौँ, र तिम्रो मित्रता मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो खुसीमध्ये एक बनेको छ।’
१०. ‘मेरा अमेरिकी मित्रहरु, तपार्इंहरुको सेवा गर्न पाउनु मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो। नागरिकका रुपमा मेरा बाँकी रहेका दिनहरुमा म तपाईंहरुसँगै हुनेछु। अहिलेलाई तपाईंहरु युवा भए पनि वा युवा मन रहेको भए पनि म राष्ट्रपतिको रुपमा एक अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु– आठ वर्षअघि तपाईंहरुले मलाई मौका दिनुभएको बेलामा जस्तै, म तपाईंहरुलाई विश्वास गर्न भनिरहेको छु। परिवर्तन ल्याउने मेरो क्षमतामा होइन, तपाईं आफैँमा विश्वास गर्नुहोस्। हाम्रो स्थापनाको दस्तावेजमा लेखिएका कुरामा विश्वास गर्न म भनिरहेको छु। दास र दासप्रथा विरोधीहरुले कानेखुसी गरेको त्यो विचार, आप्रवासी र न्यायका लागि निस्किएकाहरुले गाएको त्यो गीत, विदेशी युद्धभूमिदेखि लिएर चन्द्रमाको सतहसम्ममा झण्डा लहराउनेहरुले हिँडेको बाटो, प्रत्येक अमेरिकी जसको कथा अझसम्म लेखिएको छैन, उनीहरुको बाटोः एस वी क्यान। एस वी डिड।’
प्रकाशित २७ पुस २०७३, बुधबार | 2017-01-11 17:23:32